နိုင်ငံခြားသားများသာ ကစားခွင့်ရှိမည့် ကာစီနိုရုံများတည်ထောင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုနိုင်မည့် လောင်းကစားဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း – Eleven Media Group - Open Hluttaw
နိုင်ငံခြားသားများသာ ကစားခွင့်ရှိမည့် ကာစီနိုရုံများတည်ထောင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုနိုင်မည့် လောင်းကစားဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း – Eleven Media Group
Posted on August 22, 2018 October 1, 2018 by Open Hluttaw
နိုင်ငံခြားသားများသာ ကစားခွင့်ရှိမည့် ကာစီနိုရုံများတည်ထောင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုနိုင်မည့် လောင်းကစားဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း
— Read on news-eleven.com/news/76302
This entry was posted in GeneralChooseahluttaw sessionHluttaw NewsChooseahluttaw sessionPyithu HluttawChooseahluttaw sessionBill updates. Bookmark the permalink.
← ပုဂ္ဂလိကအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီများက Infrastructure နှင့် လိုင်းများငှားရမ်းခအား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်မှုမရှိသည့် အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ထောက်ပြမှ အရေးယူခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှ တိတိကျကျ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဟု ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ မှတ်ချက်ပြု – Eleven Media Group
သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဝန်ကြီးဟောင်းများ၏ မြေဧက ၉၀၀ ကျော် စိစစ်မည် →